Boverket: Shuruudaha la hor dhigo kireeystaha guriga oo sii adkaaneya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Linda Forsell/Scanpix
Boverket: Shuruudaha la hor dhigo kireeystaha guriga oo sii adkaaneya
Dhallin-yarada iyo soo-galootiga ayaa ugu liita
La daabacay tisdag 12 mars 2013 kl 12.01
Afar ka mid ah shanta shirkadood ee mulkida u leh guryaha kirada loo bixiyo ayaa hor dhiga shuruudo khaas ah kireeysteyaasha tusaale ahaan in ruuxu haysto shaqa joogto ah iyo cid war-bixin hagaasan ka dhiibta shakhsiga guriga kireeysanaya, sida ku cad baaritaan ay middaa ku sameeysay laanta wararka Ekot. Dhanka kale baaritaan ay sameeysay hayadda hooyga Boverket ayaa lagu caddeeyey in hal malyan oo ka mid ah bulshada dalkan ku dhaqan aannu soo gelin dhaqaale ku filan, midkaasina oo u hor-seedaya in aaney u suurtagelin guryo ey kireeystaan.
Sida uu xeerku qorayo in deegaannada la kireeysto oo ey leeyihiin degmooyinka ey masuuliyad gaar ah ka saaran tahay in bulshadu hesho hooy ey ku noolaadaan. Iyadoona ay sarkaaladda lagu magacaabo Barbro Engman oo ka howl-gasha ururka kireeysteyaasha ay aamin-san tahay in degmooyinku aaney ka soo bixin masuuliyaddaa:
- Xaaladdu sida ay maanta tahay waxaa dhacda in hooy laga kireeyn waayo dadyoow awoodi kara iney kirada iska bixiyaan. Waxaa albaabbada laga xirtaa maanta oo aan guryo laga kireeyn buslho ka badan sidii ey waagii hore ahaan jirtay, waagii guryaha la kireeystaa intaa ka badnaayeen. Iyada oo dhanka kale la adkeeyey shuruudihii guryaha lagu kireeysan jirey. Xaaladahaasina oo kor u qaadeya bulshada bannaanka ka taagan sidii ey guryo ku kireeysan lahaayeen, sida ay sheegtay.
Laanta wararka ee Ekot ayaa wax ka weeydiisay amuurtaa degmooyin tiradoodu gaarsiisan yihiin 283 degmo oo mulki u leh guryo la kireeyo iyo shuruudaha ey hor-dhigaan, iyadoona 90% degmooyinkaasi jawaab ka soo bixiyeen su'aalaha la weydiiyey. Shurudaha l agu xiro dadyoowga dooneyo iney guryo kireeystaan ayaa ah iney heystaan shaqa joogto ah (18%), heer mushaar oo mucayin ah (46,5%), cid war-bixin wanaagsan ka soo bixisa (30,1%) iyo sidoo kale in kireesytuhu aannu ka diiwaan-gashneyn hayadda khasabka ku soo celisa deeymaha - Kronofogden (60,5%) iyo in aanu shakhsigu ka diiwaan-gashaneyn liiska dembiyada (3%).
Magaalada Istockholm ayey degmada Istockholm ku xirtaa guryaha ey mulkida u leedahay in ruuxa kirada doonayaa uu mushaar ahaan u qaato dhaqaale saddex jeer ka badan qiimaha guriga uu kireeysaneyo, halka ey qaar badan ee ka mid ah mulkiileyda shirkadaha shakhsiga loo leeyahay ey shuruuddaasi tahay mushaar afar jeer ka badan qiimaha kirada guriga ee sannadkii. Iyadoona war-bixinta ay soo saartay hayadda hooyga Boverket lagu sheegay in bulsho gaarsiisan hal malyuun aaney suurtagal u heysan sidii ey guryo ku kireeysan lahaayeen.
Mikael Nilsson, ahan caalin ka howl-gala hayadda degaanka ayaa mar uu u warramayay war-geeyska Dagens Industri in guud ahaan tahay bulsho aad u fara badan, inta ey dhibaato kala soo gudboonaatey ma garan karaan, hase-yeeshee ey qaar badan ee ka mid ah dhallin-yarada iyo soo-galootiga dalka ku cusub ey ku adag tahay sidii ey guri ku heli lahaayeen.
Ajaaniibta ma kaga adag tahay iswiidhishka iney guri kireeystaan?